नेपाल बैंकमा कर्जा/निक्षेपको ब्याज कति ? (सूचीसहित) Bizshala -
नेपाल बैंकमा कर्जा/निक्षेपको ब्याज कति ? (सूचीसहित)
काठमाण्डौ । कोरोना महामारीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता बढ्दै गएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ऋण लगानी प्रवाह ह्वात्तै घटेसँगै तरलता बढेको हो।
यो अवस्थामा ग्राहकका लागि आकर्षित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न शीर्षकमा दिँदै आएको कर्जाको ब्याजदर पनि घटाएका छन्। उनीहरुले धमाधम आधार दरसँगै प्रिमियम दरलाई घटाइरहेका छन्।
यही सिलसिलामा नेपाल बैंक लिमिटेडले असोज १ गतेबाट लागू हुने गरी कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ।
नेपाल बैंकको आधार दर ६.९९ प्रतिशत रहेको छ। बैंकले सेयर धितो कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) आधार दरमा २.०५ देखि ५.०२ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर उपलब्ध गराउने भएको छ। यसको अर्थ अब सेयर धितो कर्जा नेपाल बैंकबाट ९.०४ प्रतिशतदेखि १२.०१ प्रतिशतसम्म उपलब्ध हुनेछ।
यसैगरी बैंकले घर कर्जाअन्तर्गत विभिन्न समयावधिका लागि आधारदरमा १.५५ प्रतिशतदेखि ३.६६ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर प्रवाह गर्ने भएको छ। बैंकबाट ५, १० र १५ वर्षसम्म तथा प्रोफेसनल होम लोन र होम लोन (नेपालक्ष्मी) शीर्षकमा घर कर्जा प्रवाह गर्छ।
बैंकले घडेरी कर्जा भने ३ प्रतिशत प्रिमियम दरमै उलब्ध गराउने भएको छ।
यस्तै बैंकले शुलभ आवास कर्जाअन्तर्गत ५ वर्षदेखि २० वर्षसम्मका लागि आधार दरमा १ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर कर्जा प्रवाह गर्नेछ।
बैंकले आधार दरमा १.५५ प्रतिशतदेखि ४.१६ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत गाडी कर्जा प्रवाह गर्ने भएको छ। सुनचाँदी धितो कर्जामा भने बैंकले ४.१६ प्रिमियम तोकेको छ।
बैंकले बचत निक्षेपतर्फ भने विभिन्न शीर्षकमा २.५० प्रतिशतदेखि ४.५० प्रतिशतसम्म ब्याज उपलब्ध गराउने जनाएका छ। त्यस्तै मुद्दति निक्षेपमा भने बैंकले अवधिअनुसार व्यक्तिगत तथा संस्थागत रुपमा ५.५० प्रतिशतदेखि ७.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज उपलब्ध गराउनेछ।
नेपाल बैंकको कर्जा र निक्षेप ब्याजदरसम्बन्धी सूचना यस्तो छ–